मार्सीको जित र तिन करोड नेपालीमाथि अन्याय भएको दिन - Tanahun Awaj
Home विचार/दृष्टिकोण	मार्सीको जित र तिन करोड नेपालीमाथि अन्याय भएको दिन
by Tanahu Awaj 30th January 2019 30th January 2019
30th January 2019 30th January 2019 201 views
प्रतिपक्षको अवरोध थेग्न थप मर्यादापालकको व्यवस्था, संसद भवन बाहिर पानीका फोहोरा फाल्ने दमकलको व्यवस्था आदि देख्दा उसको तयारी कति थियो र कुन हद सम्मको जवरजस्ती गर्न चाहन्थ्यो भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
गत शुक्रबार संसदमा अनौठा दृश्य देखियो । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको होहल्ला, रोष्टम घेराउ र नाराबाजीबीच चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । शुक्रबार जसरी पनि विधेयक पारित गरेरै छाड्ने योजनामा थियो, सत्ताधारी दल नेकपा । प्रतिपक्षको अवरोध थेग्न थप मर्यादापालकको व्यवस्था, संसद भवन बाहिर पानीका फोहोरा फाल्ने दमकलको व्यवस्था आदि देख्दा उसको तयारी कति थियो र कुन हद सम्मको जवरजस्ती गर्न चाहन्थ्यो भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । र त्यो हदको जवरजस्ती र हतारो किन गरिएको थियो भन्ने पनि नेपाली जनताले अब राम्रैसंग बुझिसकेका छन् ।
प्रतिपक्षी कांग्रेसले आफ्ना नेता गिरिजाप्र्रसाद कोइरालाको नाममा तनहुँमा रहेको जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास केन्द्र र अर्का नेता सुशिल कोइरालाको नाममा बाँकेमा भएको सुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल संघिय सरकार मातहत ल्याउनु पर्ने माग राख्दै संसद अवरोध गर्दै आएको थियो । जसलाई ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गत साता प्रदेश मातहत रहने भनि निर्णय गरेको थियो । कांग्रेसको माग डा. गोविन्द केसीसंग यही सरकारले गत साउन १० मा गरेको सम्झौता बमोजिमको चिकित्सा शिक्षा विधेयक आउनु पर्छ भन्ने थियो । तर सरकार र खासगरी त्यसको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो प्रतिवद्धताबाट पछि हट्दै संसदिय सर्वाेच्ताको दुहाई दिएर उम्कन खोजे र आफुलाई स्वदेशमै रहँदा अप्ठ्रयारो पर्न सक्ने ठानेर सभामुख महारासंग सल्लाह गरेर आफु विदेश रहेका बेला जसरी पनि उक्त विधेयक पास गर्न लगाए । सरकारको आज्ञापालक बनेका सभामुख महराले पनि प्रतिपक्षिसंगको छलफलमा एउटा कुरा भने र संसदमा पुगेपछि भिन्न व्यवहार प्रस्तुत गरे । विधेयक पास गराउन सरकारका प्रतिनिधी भन्दा सभामुख बढी सक्रिय भएको दृश्य त्यो दिन देखिन्थ्यो, जसका कारण शुक्रबार नेपाली संसदको इतिहासमा दोस्रो घृणित काम हुन पुग्यो । कांग्रेसले याद गर्नु पथ्र्याे कि गगन थापा बोल्दाबोल्दै माइक काट्ने र प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिएपछि सवाल जवाफ गर्न नदिने सभामुख महराले यस्ता वेइमानी पूर्ण कार्य दाहो¥याउन सक्छन् भनेर । तर कांग्रेसले सोच्यो अब त सबै राजनैतिक बेइमानीको सिमा पार भै सक्यो, त्यसैले महारा त्यस्तो गर्ने छैनन् । सायद अरु सबैको औषधी हुन्छ, बेइमानको कुनै औषधी छैन भन्ने कुरा मेसो पाएन कांग्रेसले र व्यवहारमा उतारे, सभामुख महराले ।
शुक्रबारको घटनापछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सभामुखले तटस्थ हैसियत गुमाएको बताएका छन् । उनको आरोप छ बेल घेराउ हुँदाहुदै अधिनायकवादी शैलीमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भयो । सहमतिको कुनै प्रयास गरिएन । कम्युनिष्ट सरकारले कांग्रेस नेताहरुको नामै मेटन खाज्यो । कांग्रेस अर्का नेता गगन थापाले सरकारले निषेधको राजनीति गरको उल्लेख गरेका छन् । थापाले ‘मसंग दुई तिहाई छ, मेरो विरोध गर्नेलाई म चिन्दिनँ’ भन्ने शैलीमा सरकार गएको आरोप लगाएका छन् । थापाको आरोपमा सत्यता भएको आभाष त्यतिबेला भयो जब प्रधानमन्त्री ओलीले विधेयकको विरोधलाई तीन करोड नेपाली भएको ठाउँमा केहीले असन्तुष्टि जनाउनु सामान्य हो भन्ने विचार व्यक्त गरे ।
डा. केसीका हरेक पटकका अनशन नेपालको चिकित्सा क्षेत्रका व्याप्त विकृतिको अन्त्यका लागि हो । मेडिकल शिक्षाको नियमन, नियन्त्रण र सुधारका लागि हो अनि मुलुकको चिकित्सा शिक्षामा हुदैं गएको माफियाकरणको अन्त्यका लागि हो । मेडिकल कलेजलाई लुटीखाने भाँडो बनाउनेहरुका विरुद्ध हो, शक्तिको आडमा खोलिने गुणस्तरहिन र सर्वसाधारणको पहँुच भन्दा परका शिक्षण अस्पतालको गुणस्तर सुधारका लागि हो र सर्वसाधारणको पहुँचमा बनाउन हो । तर विडम्वना सत्याग्रही केसीको माग पुरा गर्दै नेपाली जनताको समृद्धि सपना पुरा गर्नुपर्ने सरकार उल्टा गतिमा काम गरिरहेको छ । राजनैतिक विश्लेषक शेखर खरेल भन्छन्, आवरणमा समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्रको राग अलाप्ने र अन्तर्यमा चाहिँ क्रोनी क्यापिटालिस्टको (आसेपासे पुँजीपति ) पृष्ठपोषण कम्यूनिष्ट दुईमना सरकार किन र कसरी गर्दैछ भन्ने पनि डा. केसीको सोह्रौँ सत्याग्रहले उजागर गरेको छ । नेपालको चिकित्सा शिक्षाका जटिलता फुकाउँदै स्वास्थ्योपचार जस्तो नागरिकको नैसर्गिक अधिकारलाई नाफा भन्दा पनि सेवासँग जोड्दै यसको व्यवस्थापन गर्न आयोग गठन गर्ने डा. केसीसंग गरेको प्रतिवद्धता विपरित के कुराले सिंगो नेकपा र सरकारलाई निर्देशित गरिरहेको छ ? अझ मलाई आश्चर्य त केमा लागेको छ भने राजनीतिमा राम्रो सम्भावना बोकेका र राजनैतिक करियरप्रति सचेत भनिने नेकपाका युवा नेता योगश भट्टराई जसरी ज्यान छोडेर डा. केसीको सत्याग्रह विरुद्ध बोलिरहेका छन्, के यही आशा आम नेपालीले भट्टराईबाट गरेका थिए ? अवश्य थिएनन् । भट्टराई साउन १५ को नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्, डा. केसीलाई कम्युनिस्ट फोविया भएको छ र उनी अरुको बहकाउमा बर्तमान सरकारलाई वदनाम गर्न लागिपरेका छन् । भट्टराईको आरोप छ, डा. केसीले शान्ति प्रक्रियाको सफलतम समापनको माग राख्नु सरकारलाई बदनाम गराउन खोज्नु हो । आश्चर्य लाग्छ भट्टराईको विचार पढ्दा के शान्ति प्रक्रियाको सबैको चित्त बुझ्ने गरी समापनको माग राख्न कुनै नेपालीले नपाउने हो ? के दशक लामो द्वन्द्वका क्रममा मारिएका, द्वन्द्वको शिकार बनेर अनाहकमा अपाङ्ग बन्न परेका , बाबु आमा गुमाएका नागरिकले न्याय पाउनु पर्छ भनेर माग राख्न नपाउने हो ? के नेकपालाई आफुलाई न्याय चाहियो भनेर भन्न समेत नपाउने अवस्था ल्याउनका लागि नेपाली नागरिकले भोट दिएका हुन् ? न भए उक्त माग राख्ने डा. केसी प्रति विष वमन किन ? यसै विषयमा नेका युवा नेता गगन थापा भनछन्ः ‘चिकित्सा शिक्षामा सुधारमा माग राख्नु र यसका निम्ति संघर्ष गर्नु कम्युनिस्टविरोधी हुनु हो भने नेपालका कम्युनिस्टलाई रामराम मात्र भन्न सकिन्छ’ । साउन १० मा डा. केसीसंग प्रधानमन्त्रीले सहमति गर्दा संगै रहेका र सालिन व्यक्तित्वका धनी भनिने सुवास नेम्वाङ किन केही बोलिरहेका छैनन् ? प्रचण्डको मौनताको अर्थ के हो ? आश्चर्य छैन त ?
प्रचण्ड र ओलीलाई मार्सीको भात खुवाएर चर्चामा आएका झापाका व्यवसायी दुर्गाप्रसाद प्रसाईंको बी एण्ड सी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने उद्देश्यले संसदमा जुन जवरजस्ती सरकार पक्षले ग¥यो । एकछिन त्यो अस्पताल कति सर्वसाधारणको पहुँचमा छ, हेरौं । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा १३ माघमा प्रकाशित समाचार अनुसार, झापा मेची नगर ५ का ५४ वर्षिय धनप्रसाद गिरी मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेपछि खुट्टा भाँचिएर उक्त अस्पतालमा उपचार गर्न लगियो । तर २० दिन अस्पताल बसाइमा परिवारको ७ लाख ७५ हजार त स्वाहा भयो नै गिरी कहिल्यै नफर्किने गरेर गए । उनका छोरा विनोद भन्छन् ः “अब कहिल्यै यो अस्पताल आउन नपरोस्” । इलामको रोङ गाउँ पालिकाका अरुण तामाङबाट अस्पतालले दुई रात भेन्टिलेटरमा राखेको रकम साढे दुईलाख असुल ग¥यो । उपचारको नाममा इलाम वरपरका धेरैले बी एण्ड सीमा लाखौ नगद बुझाएका छन् तर ति मध्ये धेरैले नगद संगसंगै परिवारको सदस्य पनि गुमाएका छन् । यदि माथि उल्लेखित समाचार सत्य हो भने के बी एण्ड सी अस्पताल सर्वसाधारणको पहुँचमा छ ? अनि कसरी सर्वहाराको पार्टीका नेताले एकरातको उपचार लाखौ असुल्ने अस्पताललाई सम्वन्धन दिन जवरजस्ती गरेको ? किन मरिहत्ते गरेको ? बी एण्ड सीको सम्वन्धनले कति नेपालीको हित गर्छ ? प्रश्न गर्न पाइने कि नपाइने ? के यसले सरकारको नियत स्पष्ट भएको छैन र ?के यो व्यवहारले वर्तमान सरकार सर्वसाधारण नेपालीको हितमा होइन कि निश्चित चाकरीबाज माफियाको हितमा काम गर्दैछ भन्ने निश्चित भएको छैन र ? त्यसो भए माघ ११ गते शुक्रबार मार्सीको जीत र तीन करोड नेपालीको अन्यायमा परेको दिन भनेर भन्दा नाजायज हुँदैन । यो आत्मघाती कदम सरकारले छिट्टै सच्याओस् । अझै समय बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्झौता फगत सम्झौताका लागि हो कार्यान्वयनका लागि होइन भन्ने आम बुझाई हटाउन पनि सरकारले यो कदम सच्याउनु जरुरी छ । होइन भने प्रधानमन्त्री माथिको जनविश्वास स्खलित हुँदै जानेछ ।